धर्म सस्कृती – Nepal Online Khabar
आज शिवरात्री होइन, महाशिवरात्री हो। शिवरात्री अर्थात “भगवान शिवको रात” त प्रत्येक चन्द्र महिनाको १३औं अथवा १४औं दिन (आधा चंद्रचरणको कालो रात)मा हुने गर्छ तर वैदिक फागुन महिनामा आजको दिन हुने शिवरात्रीलाई त महाशिवरात्री भनेर भनिंछ। भगवान भोले वावा शंकरको प्रिय रात हो।एकजना पापी शिकारीले महाशिवरात्रीको दिन अनायसै चाहना वेगैर शिवलिंगको रातभरी आराधना गरेकोले मात्र अर्को जन्ममा त्यो पापी व्याधा राजा चित्रवाहु भएर जन्म्यो। राजा चित्रवाहु पूर्वजन्ममा पापी व्याधा थियो। एकपटक हरिणको शिकार गरी फर्कदा रात पर्यो। हरिणलाई त्यही रूखमा बाँधि रूखमा वाल-वच्चा श्रीमतीको याद गर्दै भोक-प्यास सहीत रुदै, समय कटाउन रूखको पात टिप्दै भुईमा फाल्दै रात काट्यो। मृत्युपछि त्यो पापी व्याधाको नयाँ जन्म राजा चित्रवाहुको रूपमा भयो। कुरा के रहेछ भने त्यो रूखमा काटेको रात महाशिवरात्रीको दिन परेको रहेछ भने चढ़ेको रूख
‘ज्यो.पं. – हरिप्रसाद भण्डारी’ (बरिष्ठ ज्योतिष एवं वास्तुविद) सम्पर्क नं +९७७– ९८४२१९७३५ आजको राशिफल बि.सं.२०७७ साल फागुन १४ गते शुक्रबार ई.सं. २०२१ फेब्रुअरी २६ नेपाल सम्बत ११४१ पोहेलागा चतुर्दशी, प्रमाधि नामक संवत्सर, सूर्य उत्तरायन, वसन्त ऋतु, माघ शुक्ल चतुर्दशी, चन्द्रमा कर्कट राशिमा, अश्लेषा नक्षत्र, अतिगंड योग, वणिज करण । नेपालमा सूर्योदय बिहान ०६ः३१ बजे, सूर्यास्त साँझ ६ः२ बजे हुनेछ । आज जन्म लिने बच्चाको कर्कट राशि हुनेछ ।”“आज महत्वपूर्ण कार्यका, लागि बाहिर निस्कनु पर्दा जौ मुखमा राखेर जुनसकै दिशाको, यात्रा गरेपनि शुभ फल प्राप्त हुनेछ । आज कुनै महत्वपूर्ण कार्यको शुरुवात वा शुभ यात्रामा निस्कन आजका लागि शुभ समय बिहान ७ बजेर २७ मिनेट देखि ९ बजेर २३ मिनेट सम्म छ । यो समय नेपालको राष्ट्रिय समयमा आधारित समय हो । ठाउँ अनुसार समय, तिथि, नक्षत्र, ईत्यादीमा, पनि अन्तर हुनेछ ।” “म
यस्तो रह्यो चर्चित पत्रकार रबि लामिछाने र निकिता पौडेलको दशै…हेर्नुहोस् ।
काठमाडौं : विश्वभर छरिएर रहेका हिन्दु नेपालिहरुको महान पर्व दशैको मुख्य दिन टीका हो । यसपालिको दशै कोरोनामय भयो । हर्सोल्लास दशैलाई यसपटक घरभित्रै थुनियो । कोरोनाको महामारी अझै साम्य नहुदा नेपालिहरुको दशै खल्लो हुदा नजिकको आफन्तमा मात्रै दशै खुम्चिएको छ । यता कलाकारहरूले पनि आफ्नो घरभित्रै मनाएका छन् । टिकाको दिन मान्यजनबाट टीका र आशिर्वाद ग्रहण गरेर तस्वीरहरुलाई सामाजिक संजालमा सार्बजनिक गर्ने क्रम सुरु भएको छ । यस्तैमा चर्चित पत्रकार तथा उनकी श्रीमती तथा पुर्व चलचित्र बिकास बोर्ड अध्यक्ष निकिता पौडेलको पनि टीका तस्वीर सार्बजनिक भएको छ । रबिले आफ्नो फेसबुकमा जोडिको तस्विर सार्बजनिक गरेका हुन् । उनले हालैको सिधा कुरा जनता संग कार्यक्रममा आफू कसैकोमा टीका लगाउन नजाने, कोहि आफ्नोमा आए कुकुर लगाएर खेदाउने अभिव्यक्ति दिएका थिए ।
काठमाडौ : नेपालीहरुको महान चाड विजया दशमी अर्थात दशैं आज । नायिका स्वेता खड्काले नवरात्रीका देबीहरुको जस्तै सदा नारीको सम्मान होस् भन्दै सामाजिक संजाल मार्फत् दशको तस्विर सेयर गरेकी छिन् । स्वेताले फेस्वुकमा अध्यारोमा उम्रीएर शिर सम्म पुग्ने जमराको जस्तो मान होस् भन्दै लेखेकि छिन् । स्वेताले लेख्छिन् अध्यारोमा उम्रीएर शिर सम्म पुग्ने जमराको जस्तो मान होस नवरात्रीका देबीहरुको जस्तै सदा नारीको सम्मान होस सामाजीक दुरी कायम रहेतापनी आत्मीय सम्बन्धहरु यथावत रहुन नकारात्मक तत्वहरु अन्त्य भइ सकारात्मक शक्तीको आरम्भ होस। तस्विरहरु हेर्नुहोस् ।
Oct92020 by Nepal KhabarNo Comments
अनलाइनबाटै टिका लगाउ अनलाइन वा फोनबाट आशिर्बाद लिऊ : स्वास्थ्य मन्त्रालय
काठमान्डौ : नेपालमा को'रोना संbक्रमण बढिरहेको भन्दै स्वास्थ्य मन्त्रालयले अनलाइनबाटै टिका लगाउन अनुरोध गरेको छ ।मान्यजनबाट आशिर्बाद लिन धेरै यात्रा नगर्न तथा बुढापाका संग आशिर्बाद अथवा टिका नलगाउन अ'नुरोध गरेको हो । धेरै भि’डभाड मा जम्मा भएर टिका लगाउदा संक्र'मण सारेर दु’र्घटना निम्तन सक्ने मन्त्रालयले बताएको छ ।घरमै बसेर घरमै बनेका परिकार खाएर दशैँ मनाउदा आफु पनि ब’च्न सकिने र अरुलाई पनि ब’चाउन सकिने मन्त्रालयले जनाएको छ । त्यस्तै नेपालमा पछिलो २४ घन्टामा थप २०५९ जनामा को'रोना सं'क्रमण पु'ष्टि भएको छ । स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रबक्ता प्रा डा जागेश्वर गौतमका अनुसार १३२७९ जनामा गरिएको पीसीआर परिक्षणमा थप २०५९ जनालाई पु'ष्टि भएको हो ।यस संगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या १ लाख नाघेको छ । प्रबक्ता गौतमका अनुसार आज देशभरी सक्रिय संक्रमितको संख्या २७०५३ जना रहेको छ। यस अघि हिजो १८४७३
प्र.म ओलिले रामको जन्मभुमी ठोरीमा हो भनेपछी, त्यहाँ भगवान रामको मुर्ति स्थापना गर्ने घोषण,साथै सिता गुफाको पनि पुजा गरिएको छ…हेर्नुहोस् ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रामको जन्मभूमि ठोरीमा पर्छ भन्ने अभि|व्यक्ति दिएपछि च'र्चामा आएको ठोरीस्थित सीता गुफामा विशेष पूजा गरिएको छ । स्थानीयवासीले शनिबार सीता गुफा, वनशक्ति मन्दिर लगायतका शक्तिपि'ठहरुमा कल'शयात्रा सहित विषेश पूजा गरेका हुन् । ठोरीकै अमृत धारामा जल भरेर स्थानीयले वन शक्ति मन्दिर प्रदक्षिणा गर्दै सीतागुफासम्म जलयात्रा गरेका थिए । कलश यात्रामा सहभागीहरुले राम र सीताको जयजयकार गरे । उनीहरुले सीता गुफामा पूजा गरेपछि भजनकीर्तन पनि गरे ।गाउँपालिका अध्यक्ष पद'मलाल श्रेष्ठसहितका श्र'द्धालुहरुले भगवान राम र सीता, हनुमान लगायतको वै'दिक मन्त्रोच्चा'रण सहित पूजा अ'र्चना गरेको स्थानीय गोकुली रेग्मीले बताइन् । गाउँपालिकाले नै आयोजना गरेको पूजा-अर्चनामा ब्रा'म्हणहरुले वैदिक विधिबाट स्वस्तीवाचन गर्दै सीता गुफा परिसरमा पूजापाठ गरेका उनको भनाइ छ । वर्षौंदेखि हामीले रामनवमीमा
यकाठमाडौ : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भगवान राम नेपाली भएको दा'बी गरेका छन् । भानु जयन्ती'का अवसरमा प्रधानमन्त्री निवा'समा सोमबार आ'योजित कार्य'क्रममा उनले भारतले नक्क'ली अयो'ध्या ख'डा गरेर सांस्कृ'तिक तथ्य माथि आ'क्रमण गरेको बताएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको यो अ'भिव्यक्तिले पुनः भारतिय मिडिया तातेको छ । ओलीले भनेका छन, ‘सीतालाई भारत होइन अ'योध्या वि'वाह गरिएको हो र अ'योध्या नेपालमै थियो ।उनले भगवान रामको रा'ज्य अयो'ध्या नेपालको वीरगञ्ज प'श्चिम ठोरीमा भएको बताए । उनले भारतले अयो'ध्या ख'डा गरेको दा'बी समेत गरे । हामी अहिले पनि ठा'निरहेका छौँ हामीले ‘सीता’ भारतका राजकुमार रामलाई दियौँ । भारतका होइन अ'योध्याकालाई दिएका हौँ हामीले । अयोध्या भनेको वीरगञ्ज भन्दा अलि पश्चि'मपट्टीको गाउँ हो । अहिले ख'डा गरिएको अ'योध्या होइन,’ उनले भने, ‘अयो'ध्या भी'षण वि'वाद छ है त्यहाँ । हाम्रोमा वि'वा